October 3, 2019 - ThutaSone
တရုတ်ပြည်ကအမြန်လမ်းနဲ့ မြန်မာပြည်ကအမြန်လမ်း ဘာတွေကွာခြားနေလဲ
October 3, 2019 ThutaSone 0
မြန်မာပြည်က အမြန်လမ်းနဲ့ တရုတ်ပြည်က အမြန်လမ်း ဘာတွေကွာခြားနေလဲ? တရုတ်ပြည်မှာ အမြန်လမ်းမကြီးတွေ ဖောက်တာ အစိုးရက တပြားမှ မကုန်ဘူးတဲ့… နေပြည်တော်အမြန်လမ်းဆိုတာကြီးကို နိုင်ငံပိုင်ငွေကြေးမြောက်များစွာ အကုန်အကျခံပြီး ဖောက်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ ဘယ်လောကတောင် စောက်သုံးမကျတဲ့ကောင်လည်းဆိုတာ ဒီစာလေးဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် သိသွားမယ်။ တရုတ်ပြည်မှာ လမ်းဖောက်တာ အစိုးရက တပြားတချပ်မှ အကုန်အကျမခံဘူး။ ပုဂ္ဂလိကကို […]
(03.10.2019 မှ 09.10.2019 အထိ) တစ်ပတ်စာ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်းများ
တစ်ပတ်စာ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်းများ (03.10.2019 မှ 09.10.2019 အထိ) တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်းအလုပ်တွေကိုခက်ခဲကျဉ်းကျပ်စွာလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရတတ်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေကတော့ခွင့်ယူမှု တွေများနေတတ်ပါတယ်။ လက်ဝယ်ရှိတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေ အပျက်များနေတတ်ပါတယ်။ သို့သော် မိသားစုဝင်များနဲ့ အတူတူလုပ်တဲ့ အိမ်တွင်းစီးပွားရေးတွေကတော့တိုးတတ် လာတတ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီး တဲ့သားသမီးတွေ ခရီးထွက် စီးပွားရှာတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။ ညီ၊ ညီမငယ်များရဲ့ အခက်အခဲတွေကိုကူညီပေး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ […]
စက်ဘီးနဲ့ ၁၀ တန်းကျောင်းသူ (၃)ဦးကို(၆) ဘီးကား ဘရိတ်ပေါက်ပြီးဝင်တိုက် (၂)ဦးသေဆုံး
(၆) ဘီးကား ဘရိတ်ပေါက်ပြီး စက်ဘီးနဲ့ ၁၀ တန်းကျောင်းသူ (၃)ဦးကို ဝင်တိုက် (၂)ဦးသေဆုံး… ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်း၊ မင်းလှမြို့နယ်၊ သစ်တူးအိုင်ကျေးရွာအနီး ရန်ကုန်-ပြည်ကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၀၃)အနီးမှာ ဒီနေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီကျော်လောက်က ၁၀ တန်း နှစ်ဝက် စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး ပြန်လာတဲ့ ကျောင်းသူ […]
မိုးကြိုးထိမှန်၍ ပုလောမြို့နယ်၌ အောင်စကြာစေတီတော်ကြီး ထီးတော်မြေခ….
Thursday,October 3, 2019 / ပုလောမြို့နယ်၌ မိုးကြိုးထိမှန်၍ အောင်စကြာစေတီတော်ကြီး ထီးတော်မြေခ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုလောမြို့နယ်၌ အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီခန့်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်း၍ မိုးကြိုးများပစ်သောကြောင့် အမှတ်(၅) နယ်မြေပိုင်၊ ကျောက်စုရပ်၊ မိန်းမလှ တောင်ပေါ်ရှိ အောင်စကြာ စေတီတော်ကြီး […]
ကြီးပွားချမ်းသာချင်ရင် အာစိဏ္ဏကံကုသိုလ် ဘုရားရှိခိုးဖြစ်ရဲ့လား။ သောက်တော်ရေရောနေ့စဉ်ကပ်ဖြစ်ရဲ့လား။ဘုရားပန်းလည်း အပတ်စဉ်လှူဖြစ်ရဲ့လား။ အဲ့လို့နေ့စဉ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ကို စွဲသွားတာလို့ ခေါ်တယ်။ မကြာခင် ကြီးပွါးတော့မယ့် လက္ခဏာပဲ။ သေချာမှတ်ထား၊ လောကမှာ အကုသိုလ်ကို စွဲသွားတဲ့လူရယ်၊ ကုသိုလ်ကို စွဲသွားတဲ့လူရယ်လို့ လူနှစ်မျိုးရှိတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာအကုသိုလ်ဘက်မှာ စွဲသွားပြီဆိုရင် အဲဒီလူဟာ မကြာခင် မွဲသွားတတ်တော့တာပဲ။ တွေ့ဖူးတယ်မလား၊ အရက်သေစာသောက်စားမှုကို […]
ပြည်သူများအား အောင်ဘာလေထီဖြင့် ဂျင်းထည့်ခြင်း
အောင်ဘာလေထီဖြင့် ပြည်သူများအား ဂျင်းထည့်ခြင်း Probability ဖြစ်နိုင်ချေ သဘောတရားဆိုတဲ့ သင်္ချာ သဘောတရားကို အလယ်တန်းကျောင်းသားဘဝ ကတည်းက လူတိုင်း ကိုယ်စီ သင်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ (6)မျက်နှာရှိတဲ့ အန်စာတုံးကို လှိမ့်လိုက်ရင် (1) ကနေ (6)အထိ ကဏန်းခြောက်လုံးစလုံးဟာ ကျနိုင်ခြေ အညီအမျှ ရှိပါတယ်။ (1) ဖြစ်နိုင်ချေ […]
ပိုးသတ်ဆေးတွေ သုံးပြီး ပုဇွန်ထုပ်ဖမ်းနေကြတာတဲ့
ပုဇွန်ထုပ်ကြိုက်သူများ သတိထားကြပါ။ ပိုးသတ်ဆေးတွေ သုံးပြီး ပုဇွန်ထုပ်ဖမ်းနေကြတာတဲ့… မယုံမရှိကြပါနဲ့၊ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးနီးပါး တနိုင်တပိုင် မြစ်ချောင်းထဲမှာ ပိုးသတ်ဆေးသုံးပြီး ပုဇွန်ဖမ်းနေကြတာ… ပုဇွန်ထုပ် ကြိုက်သူများ သတိထား ပိုးသတ်ဆေးပြင်း သုံး၍ ပုဇွန်ဖမ်းခြင်း ပုံပါ စိုက်ပျိူးရေးသုံး ရွက်ဖျန်းပိုးသတ်ဆေး ကို ရေ သဲ တို့ဖြင့် […]
ယူနီကုဒ်ပြောင်းတဲ့နေရာမှာ ဖုန်းအမျိုးအစားတွေကို ဒီလိုအုပ်စုခွဲလို့ ရပါတယ်… အုပ်စု (၁) ဖောင့်နေရာမှာ ယူနီကုဒ်ဖောင့်တစ်ုခုခု ပြောင်းလိုက်ရုံ ဒါမှမဟုတ် မူလပါပြီးသား default ကို ထားလိုက်ရုံ၊ language နေရာမှာ ရွေးလိုက်ရုံနဲ့ ယူနီကုဒ်ဖြစ်သွားတာ။ ဥပမာ Mi ဖုန်းတွေ။ အုပ်စု (၂) အုပ်စု ၁ […]
အသက် (၁၂၅) နှစ်ရှိ အဘိုးဦးကိုကိုကြီးအား မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အသက်အကြီးဆုံး အဘိုးအဖြစ်အထူးဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်း ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အသက်အကြီးဆုံး အဘိုးအဖြစ် အသက် ၁၂၅ နှစ်ရှိ အဘိုးဦးကိုကိုကြီးအား အထူးဂုဏ်ပြုချီးမြှင့် ငွေကျပ် ၁၀ သိန်း ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက်ကြီးဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရထားသော အသက် ၁၂၅ နှစ်အရွယ်ရှိ အဘိုးဦးကိုကိုကြီးသည် တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ ဖရဲငွေတောင်လမ်းတွင် စောင့်ရှောက်ထားသော တူမမိသားစုဖြင့် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာဖြင့် […]